खस्कियो वेष्ट इण्डिजको क्रिकेट, पहिलो एकदिवसीयमा बंगलादेशले हरायो ! - खस्कियो वेष्ट इण्डिजको क्रिकेट, पहिलो एकदिवसीयमा बंगलादेशले हरायो !
खस्कियो वेष्ट इण्डिजको क्रिकेट, पहिलो एकदिवसीयमा बंगलादेशले हरायो !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, ७ श्रावण, 04:05:16 AM
काठमाडौं, ७ साउन । क्रिकेटमा धुवाँधार व्याटिंग गर्ने वेष्ट इण्डिजका व्याट्सम्यानको क्रेज अहिले खस्किएको छ । उसका सुपरस्टार क्रिस गेल, आन्द्रे रसेल जस्ता विश्वप्रसिद्ध व्याट्सम्यान भएपनि पछिल्ला खेलमा निराशाजनक प्रदर्शन गरेको छ ।
अमेरिकाको प्रोभिडेन्समा सोमबार बिहान सकिएको खेलमा एसियाली टाइगर बंगलादेशले सिमित ओभरको विश्वविजेता वेष्ट इण्डिजलाई हराएको हो । ट्वेन्टी ट्वेन्टी ओभरमा राम्रो प्रदर्शन गर्दै आएको वेष्ट इण्डिज भने टेस्ट र एकदिवसीय क्रिकेटमा खस्किदै गएको छ ।
अमेरिकी भूमिमा पहिले व्याटिंग गरेको बंगलादेशले पुरा ५० ओभरमा ४ विकेट गुमाएर २ सय ९८ रनको मध्यम लक्ष्य वेष्ट इण्डिजसामु प्रस्तुत गरेको थियो । उसका लागि तमिम इक्वालले सर्वाधिक १ सय ३० रनको शतकीय पाली खेले । शकिल अल हसनले बलियो गरी साथ दिएपनि उनी शतक बनाउन भने ३ रनले चुके । शकिब ९७ रनमा अलआउट भएका थिए ।
तर मध्यम लक्ष्य पनि वेष्ट इण्डिजले भेट्टाउन सकेन । बंगलादेशका मासार्फा मुरतार्जाले ४ र मुसाफिकर रहमानले २ विकेट लिएपछि वेष्ट इण्डिज ५० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर २ सय ३१ रनमै सिमित हुन पुग्यो ।
यसअघि टेस्ट क्रिकेट जितेको वेष्ट इण्डिजले अहिले बंगलादेशलसँग एकदिवसीय क्रिकेट खेलिरहेको हो । तर पहिलो एकदिवसीयमा बंगलादेशले १ शुन्यको अग्रता लिएको छ ।
२०७५, ७ श्रावण, 04:05:16 AM